I-AutoCAD, i-Civil 3D kunye nezinye iimveliso ze-AutoDesk iimveliso
I-Plexscape, abaphuhlisi bePlex.Earth®, esinye sezixhobo ezithandwa kakhulu yi-AutoCAD yokukhawulezisa uyilo, ubunjineli kunye nolwakhiwo (AEC), iphehlelele i-Timeviews ™, inkonzo eyodwa kwimarike ye-AEC yehlabathi, eyenza Eyona nto ifikelelekayo kwaye ifikeleleka ngokulula kwimifanekiso yesatellite kwi-AutoCAD. Emva kobambiswano lobuchule ...
Lo ngumxholo we-AutoCAD yekhosi yasimahla ekwi-intanethi. Yenziwe ngamacandelo ama-8 alandelelanayo, ngaphakathi kwayo kukho iividiyo ezingaphezu kwama-400 kunye neenkcazo zendlela esebenza ngayo i-AutoCAD. ICANDELO LOKUQALA: IINKCUKACHA ZESISEKO Isahluko 1: Yintoni i-Autocad? Isahluko 2: I-Autocad screen interface Isahluko 3: iiYunithi kunye noLungelelwaniso Isahluko 4: Iiparameter
AutoCAD-AutoDesk, Izifundo zamahhala
Ukujongwa kwamaxesha yiplagi enomdla kakhulu evumela ukufikelela kwimifanekiso yesatellite eyimbali evela kwi-AutoCAD, ngemihla eyahlukeneyo kunye nezigqibo. Ukuba nemodeli yendlela yedijithali endiyikhupheleyo kuGoogle Earth, ngoku ndifuna ukubona imifanekiso yembali yale ndawo. 1. Khetha indawo enomdla. Inkqubo ilula. I ...
I-Transoft Solutions Inc., inkokheli yehlabathi kuyilo lobunjineli kuyilo kunye nohlalutyo lwesoftware, isebenzisane nePlexscape, abaphuhlisi bePlex.Earth®, esinye sezixhobo ezithandwa kakhulu yi-AutoCAD yokukhawulezisa uyilo, ubunjineli kunye neeprojekthi zokwakha. (AEC). Eyona nto iphambili kwintsebenziswano yayikukuhlanganiswa kwetekhnoloji ye-AutoTURN®…
Nangona sinokuthi sifike kwinqanaba, sibonisa ukuba uMngenisi weOfisi sisixhobo esinokuthi sidityaniswe nespredishithi se-Excel okanye ifayile yeLizwi, kwaye oku kuhlaziywa ngamandla njengoko ifayile yoqobo iguqulwa, imbali njengoko iakhawunti uBrendan Haggerty iyifom yam ...
Dwg Office for ebulalayo
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 14 kwiphepha elilandelayo